Uzoyibonani Baba uyeke ukungiphoxa? - Ukuzijabulisa
Abalingisi Bakababa Yekani Ukungiphoxa
Yiziphi iziqephu ezikuphathele zona?
Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zokulinda, abakwaNetflix banqume ngekusasa lochungechunge olusha lwamahlaya luka-Jamie Foxx elithi Dad Stop Embarrassing Me!, olwakhonjiswa ku-Netflix ngo-Ephreli 2021. Ngeshwa, sifundile ukuthi i-sitcom ye-Netflix ikhanseliwe ngemuva kwesizini eyodwa futhi. ngeke ivuselelwe ngomzuzwana. U-Jamie Foxx noJim Patterson badale uchungechunge lwamahlaya lwe-Netflix Original elithi Dad Stop Embarrassing Me!
Yize kungelona uchungechunge lokuqala loqobo ukufaka i-Foxx, kungokokuqala ukuthi umnqobi we-Oscar avele koyedwa. Umsebenzi kaFoxx wokuqala wethelevishini wawungowamahlaya ikakhulukazi, okuhlanganisa nezindima ku-In Living Color kanye ne-3rd Rock evela eLangeni, kanye nochungechunge lwakhe, i-Jamie Foxx Show, aludala, wadlala kulo, futhi walukhiqiza.
Uma ufuna inhlanganisela yamahlaya nezothando sinayo idokodo lokuqabula ohlwini lwethu ngawe.
UJamie Foxx wadlala indima kaBrian Dixon
U-Jamie Foxx ungumlingisi, usomahlaya, umculi, kanye nomkhiqizi wokuqopha wase-United States. Ujoyine abalingisi bohlelo lwamahlaya oludwetshiwe oluthi In Living Colour ngo-1991 futhi wahlala waze waphela umbukiso ngo-1994.
UDavid Alan Grier udlale indima kaPops Dixon
UGrier uthole ingxenye kaJackie Robinson kumculo we-Broadway wesikhashana othi The First, owawuqondiswa uMartin Charnin futhi wabhalwa uJoel Siegel, ngemva nje kokuphothula eYale. UGrier uthole Umklomelo Womhlaba Wethiyetha Wokuqala futhi waqokelwa Indondo ye-Tony Yomlingisi Ovelele Ovelele Emculweni.
Jonathan Kite wadlala indima kaJohnny Williams
UKite, indodana kaLynn noDavid Kite, wakhulela eSkokie, e-Illinois. Ufunde eNiles North High School nase-Old Orchard Junior High School. Uthole iziqu zeshashalazi e-University of Illinois e-Urbana-Champaign. Uphuma emndenini wamaJuda.
Heather Hemmens udlale indima ka-Stacy Collins
UHemmens wakhulela nabafowabo ababili abadala kanye nodadewabo omdala ehlathini eduze kwaseWaldo, eMaine. UHemmens wafunda eMount View High School eThorndike, eMaine, iminyaka yakhe yokuqala emibili esikoleni samabanga aphezulu ngaphambi kokudlulela eWalnut Hill School for the Arts eBoston iminyaka yakhe emibili yokugcina. Ngemva kokuphothula iziqu, wathuthela eLos Angeles ukuze enze umsebenzi wokulingisa. Uyibhande elimnyama le-karate elinokuqeqeshwa kwezikhali.
Ukungakhulumisani okuhlazisayo nomelaphi kubangela ukuba uSasha noBrian babhekane nezinkinga zabo lapho ehlala noBrian.
Lapho uSasha etshela umndeni wakhe ukuthi akakholelwa kuNkulunkulu, uya naye enkonzweni yesonto eqhutshwa umfundisi ophambili. Uthulula isifuba ku-Stacy ngokuhamba kwesikhathi.
USasha uzama kanzima ukugcina izinto zisezingeni eliphansi ngenkathi elinde ukukhahlelwa okukhethekile lapho uBrian efika netende, izoso, nomshini wekaraoke.
UBrian usebenzisa ifoni yakhe ukulandela u-Sasha futhi uthola ukuthi uqamba amanga. Uzibambela mathupha lapho ethola uBrodie namanye amantombazane.
Lapho umkhiqizo omusha we-BAY Cosmetics ubangela ukungezwani komzimba, ividiyo ka-Sasha yenkundla yezokuxhumana iba negciwane, futhi uBrian uba nomuzwa we-inthanethi.
UPops uqhudelana emqhudelwaneni we-BBQ nezingane zakubo epikinikini yaminyaka yonke kaJuneteenth yomndeni. Iloli likaSasha noBrian liya ephathini yangakubo.
UBrian ushintsha indlela yakhe yokuba ngumzali ngemva kokufunda incwadi kaFloyd Mayweather. Nokho, lapho uSasha ebonisa ukuziphatha okungajwayelekile, uBrian uphendukela ekuhlolweni kwezidakamizwa ukuze athole izimpendulo.
UBrian unikezwe ithuba lebhizinisi elingalindelekile. I-Pops inikeza i-inthanethi ukuphola isithombe. USasha nabangane bakhe bazingelwa ngamaphoyisa ngemuva kokuchazwa ngokwebala.
Ababhalisile nabagxeki bebengazweli kahle, ngenani eliphansi elingamaphesenti angama-25 kutamatisi obolile (amaphuzu ezithameli angamaphesenti angama-49) kanye nesilinganiso se-IMDb esingu-4.2 kuphela. Izibalo zilondoloze imibukiso ekukhanselwe esikhathini esidlule, kodwa bezingenele ukulondoloza uBaba Ongiphoxayo! ngalesi sikhathi.
Iminyaka ka-John Legend, Unkosikazi, Izingane, kanye Ne-Net Worth
Ingabe Isizini Yomndeni Yesimanje 12 Ikhanseliwe Noma Cha?